दुःखद खबरः यस्तो डरलाग्दो सडक दुर्घटना, १० जनाको निधन! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > दुःखद खबरः यस्तो डरलाग्दो सडक दुर्घटना, १० जनाको निधन!
admin October 3, 2020 October 3, 2020 अन्तराष्ट्रिय	0
असोज (रासस/एएनआई) अफगानिस्तानको हेरात कान्दाहार राजमार्गमा बिहीबार भएको सडक दुर्घटनामा परी १० जनाको ज्यान गएको छ । बिहीबार अफगानिस्तानको हेरात प्रान्तका गभर्नरका प्रवक्ताले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले उक्त राजमार्गमा बिहीबार भएको सडक दुर्घटनामा परी १० जनाको ज्यान गएको बताउनुभएको हो ।
प्रवक्ता जिलानी फराहादले बिहीबार बिहान हेरात प्रान्तको पश्चिमी सडकमा सो दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो प्रान्तको दादर्सन जिल्लाको तपाखाई भन्ने स्थानमा सो दुर्घटना भएको बताउनुभयो ।
उक्त सडकमा गुडिरहेको बस र विपरीत दिशाबाट आएको अर्काे सवारी साधन ठोक्किँदा त्यसमा रहेका यात्रुहरुको ज्यान गएको बताइएको छ । सो यात्रामा रहेका पाँच पुरुष, तीन महिला र दुई बालबालिकाको ज्यान गएको बसमा रहेका केही यात्रु घाइते भएका पनि समाचारमा जनाइएको छ । ** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
कमरेड प्रचण्डः बाबुराम-विप्लव र म एकभए कायापलट हुन्छ!
अत्यन्तै दु:खद खबर: ८० जना कामदार भित्रै रहेका गोदामघरमा आगो लागेपछि मर्नेहरुको यस्तो बिजोग !